Uthatha inxaxheba kwi-XXIV uJosé Nogales Amanqaku amaBali amaFutshane | Uncwadi lwangoku
UCarmen Guillen | | Ukhuphiswano kunye neeMbasa, Iincwadi
La IBhunga lePhondo laseHuelva (Andalusia, Spain) ikhuthaza unyaka nonyaka UJosé Nogales Amanqaku amaBali amaFutshane, kwaye okwangoku ivulelekile ukuba ithathe inxaxheba. Eli fowuni livulelekile kubo bonke ababhali, kwilizwe nakwamanye amazwe, ngokucacileyo ngaphandle kwabaphumeleleyo kuhlelo lwangaphambili.
Ukuba ufuna ukwazi ukuba zeziphi iziseko eziza kukwazi ukwazi ukuba ungathatha inxaxheba kuyo, siyishiya kuwe.
Bonke abafundi banokungeniswa kwiBhaso lamaBali amaFutshane likaJosé Nogales ababhali belizwe nabangaphandle onqwenela ukuthobela lo mnxeba, ngaphandle kwabo baphumeleleyo abasele bephumelele kwiminyaka edlulileyo.
Umbhali ngamnye angenise ubuninzi bamabali amathathu.
Umbhali uya kunikezela amalungelo ohlelo lokuqala lomsebenzi onikezelweyo kwiziko elidibeneyo (iDiputación de Huelva), elinokuthi lipapashe ngendlela elibona lifanelekile, kubandakanya nohlobo lwedijithali.
Amabali aya kuvela free umxholo kwaye kufuneka ibhalwe ngaphakathi Ulwimi lweSpanish; iya kuba yoqobo, engashicilelwanga kwaye ingaziswanga kulo naluphi na olunye ukhuphiswano isisombululo esilindileyo (ngesihloko esinye okanye esahlukileyo).
Imisebenzi ziya kwenziwa thaca kathathuIshicilelwe nge isithuba esiphindwe kabini (Times New yamaRoma font, ubungakanani 12) ngu ubuso obunye. Ulwandiso aluyi kudlula kumaphepha ali-15 nangayiphi na imeko kwaye ayiyi kuba ngaphantsi kwe-8, kubandakanya ukuthunyelwa a cd / i-dvd ikopi yayo yedijithali.
Iitekisi kufuneka zichongwe kuphela ngabo isihloko kunye nelemekhethwe ngumbhali, eswele utyikityo okanye naziphi na ezinye iinkcukacha ezinokubonisa ukuba ngubani lowo.
Iseka i- ibhaso elinye le-6.000 euro Isicatshulwa esiphumeleleyo, ngokuxhomekeke kumthetho wangoku werhafu, nangona unokubhengezwa njengongekhoyo.
Umsitho wokuwongwa ngokusesikweni uya kuqhubeka malunga nesiqingatha sesibini sikaNovemba 2017, kwaye uya kuzinyaswa ngulo uphumelele ibhaso kwaye uya kubandakanya intetho eprintiweyo yebali eliphumeleleyo.
Ijaji iya kubhengeza igama lomntu ophumeleleyo kwi-XXIV uJosé Nogales International Award Award Ekupheleni kuka-Okthobha ka-2017, ibe sisigqibo sayo sokugqibela.
Izicelo ziya kuthunyelwa kuphela ngokuhanjiswa kweposi kwi INkonzo yeNkcubeko yeBhunga lePhondo laseHuelva, ibekwe kwi Ibala leMidlalo yeIberoamerican. C / Honduras, s / n. 21007 Huelva, Ibonisa kwimvulophu I-XXIV uJosé Nogales yamaBhaso amaFutshane eBali.
Izicelo zingathunyelwa Kude kube ngu-30 Septemba.
Isicelo ngasinye esithunyelweyo kufuneka sihambe ngolu hlobo lulandelayo:
Imvulophu: Iya kubandakanya ikopi yephepha lesicatshulwa, eliza kuchongwa kuphela ngesihloko salo kunye nesiqubulo esikhethwe ngumbhali, lingenalo utyikityo kunye negama kunye ne-cd / dvd enekopi yedijithali yayo.
Imvulophu yesibini: Kufuneka iqulathe isiHlomelo I, esizaliswe ngokufanelekileyo kunye nesiHlomelo II. Isibhengezo sombhali apho aqinisekisa khona ukuba amalungelo omsebenzi abekiweyo awachatshazelwa kwaye ngowokuqala, awupapashwanga kwaye awuzange unikezwe- ngesihloko esinye okanye esahlukileyo- kuye nakuphi na okunye ukhuphiswano kusalindwe isisombululo ngaphambili okanye ngexesha inkqubo yokhetho kude kube ngumzuzu wesigqibo sejaji. Ifotokopi yesazisi esisemthethweni okanye ipasipoti nayo iya kubandakanywa kuyo.
Ukwazi ngakumbi malunga nejaji kunye nokukhuphela izihlomelo kwimvulophu yesibini ekufuneka uyithumele, sikushiya oku kulandelayo unxibelelwano, apho unokufumana khona yonke into.
Ngethamsanqa kubo bonke abo babhali bagqiba kwelokuba bazazise!
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Thatha inxaxheba kwi-XXIV uJosé Nogales Short Award Award
Enkosi kakhulu ngokwabelana ngolwazi. Masibone ukuba ndiyazazisa na.
I-hug evela e-Oviedo kunye nolonwabo ngoMvulo weholide.
5 ababalisi ababalaseleyo kwimbali